Mbupu zuru ụwa ọnụ nke smartphones ga-ada afọ a, mana ọ ga-abawanye na 2020 | Gam akporosis
El ahịa ekwentịN'agbanyeghị eziokwu na ọ na-eto eto, ọ na - egosiputa - na afọ ole na ole ugbu a - mbelata ire ahịa ... n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ezie.
Agbanyeghị, dịka ezigbo ngosipụta, dị ka amụma ọhụrụ sitere na International Data Corporation (IDC) si kwuo, ihe ngosi ekwentị ekwentị zuru ụwa ọnụ kwa afọ na-egosi. ihe ịrịba ama nke mgbake ahịa na ọkara nke abụọ nke 2019 na 2020, na-atụ aro uto nke mbupu ekwentị.
IDC na-atụ anya ka mpịakọta mbupu dị nso (-0.4%) na ọkara nke abụọ nke afọ a, mgbe ahịa ahụ na-ebelata afọ 2.2% kwa afọ n'afọ, na-eme ka 2019 bụrụ afọ nke atọ nke nkwekọrịta ụwa. N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ nyocha ahụ na-atụ anya uto mbupu ka ọ rue 1,6% na 2020.
Okwuru na olile anya olile anya abiala maka uwa nke smartphones dika 5G. Ebe ọ bụ na ntinye azụmahịa malitere n'ọtụtụ mpaghara, 2020 yiri ka ọ bụ afọ nke netwọkụ 5G ga-amalite ịgbasawanye ike na ụwa. IDC na-atụ anya mbupu 5G iru 8.9% nke smartphones zigara na 2020, na-anọchite anya 123.5 nde ngwaọrụ na-abịanụ ka ere. A na-atụ anya na nke a ga-eto na 28.1% rue 2023.
Akụkọ ahụ kwuru na Onu ogugu nke gam akporo ga-abawanye na 87.0% na 2019 site na 85.1% na 2018, nke bụ isi n'ihi ntinye 5G na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke ngwa ochie. A na-atụ anya na mpịakọta ga-eto na afọ ise na-eto eto kwa afọ (CAGR) nke 1.7% na mbupu nke 1.3 ijeri na 2023.
Ọ bụrụ na ihe a niile bụ eziokwu, ga-aba uru maka ndị na-emepụta ama, na enyemaka maka ndị a ma ama n'ụwa niile, ikekwe, ebe ọ bụ na taa akụkụ a juputara na ọ ga-abụ na ndị na-ewu ewu ntakịrị ga-akụtụ. Chi ọbụbọ ma anyị ga-ahụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IDC: Mbugharị Smartphone zuru ụwa ọnụ ga-ajụ afọ a, mana teknụzụ 5G ga-abawanye na 2020
OPPO A9 2020 nwere ụbọchị ngosipụta nke gọọmentị